PVC နှစ်ဆမြို့ရိုးအမြှောင်းပုံပြွန်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း - တရုတ် Qingdao Suke Machinery
PE / PVC လူပျို / နှစ်ချက်အမှတ်တရမြှောင်းပုံပိုက်ထုတ်လုပ်မှု Extrusion စက်လိုင်းဖော်ပြချက်: ဒီမြှောင်းပုံထုတ်လုပ်မှုလိုင်းအဆက်မပြတ် PE, PP, PVC, နဲ့ Eva ၏ Single-မြို့ရိုးကိုသို့မဟုတ်နှစ်ဆမြို့ရိုးအမြှောင်းပုံပိုက်အဖြစ် PA ဆိုပြီးမြှောင်းပုံပိုက်ထုတ်လုပ်ရန်အသုံးပြုသောနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာမြှောင်းပုံပိုက်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းမြှောင်းပုံပိုက် extrusion လိုင်း / pe ပိုက် extruder / pe မြှောင်းပုံပိုက်စက် / pe မြှောင်းပုံမြှောင်းပုံပိုက်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း / pe PVC မြှောင်းပုံပိုက် extruder / PVC မြှောင်းပုံပိုက်စက် / PVC ကိုခေါ် calso ။ Charac ...
PE / PVC လူပျို / နှစ်ချက်အမှတ်တရမြှောင်းပုံပိုက်ထုတ်လုပ်မှု Extrusion စက်လိုင်း
ဒီမြှောင်းပုံထုတ်လုပ်မှုလိုင်းအဆက်မပြတ် PE, PP, PVC, နဲ့ Eva ၏ Single-မြို့ရိုးကိုသို့မဟုတ်နှစ်ဆမြို့ရိုးအမြှောင်းပုံပိုက်အဖြစ် PA ဆိုပြီးမြှောင်းပုံပိုက်ထုတ်လုပ်ရန်အသုံးပြုသောနိုင်ပါသည်။
ဒါဟာမြှောင်းပုံပိုက်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းမြှောင်းပုံပိုက် extrusion လိုင်း / pe ပိုက် extruder / pe မြှောင်းပုံပိုက်စက် / pe မြှောင်းပုံမြှောင်းပုံပိုက်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း / pe PVC မြှောင်းပုံပိုက် extruder / PVC မြှောင်းပုံပိုက်စက် / PVC ကိုခေါ် calso ။
ပလတ်စတစ် Single-မြို့ရိုးအမြှောင်းပုံပိုက်၏အင်္ဂါရပ်များရှိ high temperature resistance, resistant to corrosion and abrasion, high intensity, good flexibility, etc.
သူတို့ကကျယ်ပြန့်အော်တိုဝါယာကြိုးများ၏နယ်ပယ်များတွင်အသုံးပြုကြသည်, လျှပ်စစ်ချည်-ဖြတ်သန်းပိုက်, စက်ကိရိယာဆားကစ်, မီးခွက်နှင့်မီးအိမ်ဝါယာကြိုးများ၏အကာအကွယ်ပိုက်, လေအေးစက်နှင့်အဝတ်လျှော်စက်ပြွန်ဤမြှောင်းပုံပိုက်အထူးသဖြင့်တက်-စျေးကွက်၏ဝါယာကြိုးအဖြစ်အသုံးပြုကြသည် ကားများ, လျှပ်စစ်ပြွန်ပိုက်သွားတာ, အဝတ်လျှော်စက်, လေအေးပေးစက်ပိုက်, ဆီမီးခွက်ပိုက်, etc
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီအားဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးပလတ်စတစ် Single-မြို့ရိုးအမြှောင်းပုံပိုက်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းမြန်နှုန်းမြင့်တန်ဆာသေချာသောထုတ်ကုန်များအအေးများနှင့်လေကြောင်းရန်အအေးပျံ့နှံ့နေတဲ့ရေ, တောင်မြှောင်းပုံချောမွေ့အတွင်းနှင့်အပြင်ဘက်နားလည်သဘောပေါက်မှသကဲ့သို့မှိုနှင့်တင်းပလိတ်များ run ဖို့ဂီယာချမှတ် ပိုက်သည်မြို့ရိုး။
1. လူပျိုဝက်အူ extruder: SJ-45/30, 65/30
2. Corruated ပိုက်မှို: 50-72pairs
4. ကိုနှစ်ချက်ဘူတာရုံ winder
တစ်ခုတည်းသောဝက်အူ extruder ၏မော်ဒယ် SJ-30B SJ-45B SJ-65B SJ-90B SJ-120B SJ-150B
အဆိုပါ extruder ၏ဝက်အူ (L / D) 25-33 25-33 25-33 25-33 25-33 25-33
အဆိုပါ extruder အာဏာ (KW) 2.2-7.5 7.5-22 18.5-55 55-185 90-280 110-300
အပူပါဝါ (KW) 5-8 6-12 12-18 16-40 20-60 30-80
မက်စ်။ Extruding စွမ်းဆောင်ရည် (ကီလိုဂရမ် / ဇ) 18 60 180 450 650 950
ယခင်: PP နှစ်ဆမြို့ရိုးအမြှောင်းပုံပြွန်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
နောက်တစ်ခု: PVC Fiber စစ်ကူပိုက်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
ပလပ်စတစ် PVC ပိုက် Extrusion လိုင်း drain
PVC ပိုက် Extruder စက်
PVC ပိုက် Extru ထားခြင်းစက်
PVC ပိုက် Extrusion စက်လိုင်း
PVC ပလတ်စတစ်ပိုက် Extrusion လိုင်းယိုစီးမှု